Asomafo 24 NA-TWI - Wodi Paulo asɛm wɔ Felike anim - Bible Gateway
Asomafo 23Asomafo 25
Asomafo 24 Nkwa Asem (NA-TWI)
24 Nnanum akyi no, ɔsɔfo panyin Anania ne mpanyimfo bi ne mmaranimfo bi a ne din de Tertulo kɔɔ Kaesarea. Woduu hɔ no, wɔkɔɔ Amrado Felike nkyɛn de nsɛm a wɔwɔ tia Paulo no too n’anim. 2 Wɔfrɛɛ Tertulo ma ɔbɔɔ ne nkuro se, “Onuonyamfo! Esiane wo nimdeɛ ne w’akwankyerɛ pa nti, efi bere a wobae yi, nsakrae pa pii aba yɛn man yi mu ama yɛn ho atɔ yɛn. 3 Baabiara a yɛwɔ no yɛka eyi ho asɛm na yɛn ani sɔ nea woayɛ ama yɛn no da wo ase papaapa. 4 Mempɛ sɛ mesɛe wo bere enti mesrɛ wo sɛ nya bere tiaa bi ma me na tie asɛm a merebɛka afa saa ɔbarima yi ho no. 5 Yɛahu sɛ saa ɔbarima yi yɛ ɔmammɔfo a ɔde basabasayɛ ba Yudafo nyinaa mu. Ɔyɛ Nasiri fekuw no mu panyin. 6 Ɔpɛe sɛ ogu asɔredan no ho fi. Ɛno nti, yɛkyeree no yɛɛ yɛn adwene sɛ anka yɛbɛfa yɛn mmara so abu no atɛn. 7 Nanso ɔsafohene Lisia begyee no fii yɛn nsam abra nso, 8 hyɛe sɛ wommedi n’asɛm wɔ w’anim. Sɛ wubisa no a, wo ara ankasa wubehu sɛ nsɛm a yɛreka afa ne ho no nyinaa yɛ nokware. 9 Yudafo no nso foaa nsɛm a wɔkae no so, sɛ ɛyɛ nokware.